TENSHINSEIKY gị TIMELINE
1882: Shimada Heikichi, nwanne nwoke nke okenye nke onye nchoputa Shimada Seiichi, amụrụ na Obodo Ōgoe, Saitama.
1892: Tenshin Ōmikami pụtara na Shimada Heikichi na mbụ, na-ebu amụma ọmụmụ nke nwanne ya nwoke nke nta Shimada Seiichi, onye ghọrọ onye guzobere aha ya bụ Shodai-sama.
1892: Heikichi malitere ịrụ ọrụ ebube, dị ka ịgwọ ìsì na "ide mmụọ" site na ịtọ Tenshin Ōmikami. A bịara mara nke a dị ka mbido mbụ nke Chineke.
1896: Heikichi kwupụtara na Tenshin ikmikami ga-alaghachi n'eluigwe, n'oge na-adịghịkwa anya, Heikichi kwupụtara na ya enweghịzi ike ịrụ ọrụ ebube.
1896 (February 11): Onye malitere, Seiichi Shimada.
1909-1920: Seiichi kwagara Tokyo ma guzosie ike dika onye ahia ahia.
1923 (February): Seiichi lụrụ Ei, onye dị iri abụọ na otu n'oge ahụ.
1932: N'ihi azụmaahịa dara ada, a manyere Seiichi ire ụlọ ya ma ezinụlọ daa ogbenye. Ọ were ọrụ dị ka ore ahia.
1935 (Jenụwarị): Seiichi lere anya igbu onwe ya, rịọ Chineke maka enyemaka.
1935 (Jenụwarị 18): Onye ahịa ahia, Satō Yasutaka, nwere Tenshin Ōmikami wee gwa Seiichi: "Abụ m chi gị na-eche nche." O nyere Seiichi ndụmọdụ doro anya banyere ahịa soybean, nke mechara bụrụ eziokwu. A bịara mara nke a dị ka ọbịbịa nke abụọ nke Chineke.
1935 (February 11): Seiichi nwere nzukọ ekpere mbụ maka Tenshin ikmikami n'ụlọ ya na Saga-chō, na begian na-enwe nzukọ ekpere kwa ọnwa.
1935 (Oge Ezumike): Seiichi na onye kwere ekwe ibe ya si na Mt. Kurama na Kyoto ruo Mt. Akiha na Mt. Kuno na Shizuoka. Ọ malitere inweta ikike dị omimi, dị ka ịgụ akwụkwọ n'ọchịchịrị.
1937 (November 29): Shimada Heikichi nwụrụ.
1937: E hiwere ọgbakọ mbụ, ọgbakọ Tokyo (n'enweghị ikike), ma mara ya dị ka Tenshin Kai.
1945 (March 10): Selọ Seiichi gbara ọkụ na ọkụ ọkụ Tokyo. Seiichi na ezinụlọ ya kpọpụrụ Saitama.
1947-1949: Typhoon Kathleen jupụtara na Saitama na Septemba 15, 1947. A rụrụ ụlọ Seiichi n'ụzọ ọrụ ebube. Seiichi malitere iwu ụlọ ọhụrụ na Bunkyo Ward (nke dị nso n'isi ụlọ ọrụ ugbu a) na 1948; arụ ọrụ, arụchara na Septemba 1949. houselọ ahụ gụnyere ime ụlọ ịchụàjà maka ememe.
1949: Seiichi maliteghachi nzukọ ekpere kwa ọnwa na Ọktọba n'ụlọ ebe ịchụàjà ya. Ndị kwere ekwe bidoro ileta ya ma soro ya nọrọ n’ụlọ ya. A maara okpukpe ahụ "Kagomachi no Tenshin-sama," aha ya bụ mgbe ọnọdụ ụlọ ya dị na Kagomachi, Bunkyō Ward.
1949 (Eprel): Seiichi lụrụ nwunye ya nke abụọ, Kyoko (onye na-amaghị nkwenkwe okpukpe ya).
1950 (July): Seiichi rịara ọrịa. Achọpụtara na ọ na-arịa kansa nke afọ / eriri afọ na nnukwu appendicitis. Ọ wara ya ahụ na mberede ma gbakee n'ụzọ ọrụ ebube.
1950 (Disemba 25): Seiichi gwọrọ ọrụ ebube gwọọ mmadụ abụọ na-arịa ọrịa ọgụgụ isi. Akụkọ banyere ọrụ ebube gbasara gbasara, ọtụtụ ndị kwere ekwe bidoro ileta be ya.
1951 (Jenụwarị 11): Seiichi na Tenshin Ōmikami gbara ndụ iji bụrụ onye ndu okpukpe.
1952: Seiichi debara aha Tenshin Ōmikami Kyō dịka nzukọ okpukpe.
1960: E mechara ụlọ nsọ Tenshin Ōmikami Kyō na Tokyo.
1961: Seiichi natara nkuzi Chukwu banyere usoro ọgwụgwọ eji “mmiri Chukwu” (go-shinsui).
1967: enslọ ọgwụ ndị mmekọ dị na Tenshin Ōmikami Kyō, Yamatoura Clinic (nke mechara kpọọ Tenshin Clinic), meghere na Kagomachi, Tokyo.
1975 (Septemba): Emechara mweghachi na "Ōgoe Holy Site" nke ebe amụrụ Seiichi.
1976 (Eprel 11): Diọkpara nke Seiichi, Shimada Haruyuki, nọchiri ya dị ka onye isi nke okpukperechi.
1976 (May 8): Emere Ememe Ememe Afọ Iri na ise na Nippon Budohkan.
1985 (May 3): Shimada Seiichi nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri asatọ na itoolu.
1990: A gbanwere aha nzukọ ahụ na Tenshinseikyō.
2001 (Eprel 11): Shimada Kōichirō ghọrọ Nna-ukwu nke Atọ.
2001 (May 12): Emume Ememe Afọ nke iri ise emere na Tokyo International Forum.
2006 (February 11): Mainlọ Nsọ ọhụrụ (Honbu Seidō) e dechara na Tokyo.
2009 (Eprel): E hibere ụlọ ọrụ gọọmentị gọọmentị.
Ọ bụ ezie na a na-ede aha ya dị ka òtù okpukpe na 1952, Tenshinseikyō na-esite na ihe omume a maara dị ka "Mbịbịa Chineke nke mbụ" n'oge 1895-1896, mgbe chi ha, nke a maara dịka Onye Isi Nchịkọta Isi nke Tenshin Ōmikami (天 心 大 御 神), pụtara Shimada Heikichi (島 田平吉), nwanne nwoke nke okenye nke onye nchoputa Shimada Seiichi (島 田 晴 一). [Foto dị n'aka nri] Na Jenụwarị nke 1895 Shimada natara ozi site na Tenshin Ōmikami na-ekwupụta na a ga-amụ nwanne nwoke nke obere n'afọ na-esote, a ga-akpọkwa ya Seiichi. Ọ natakwara akpa akwụkwọ na akpụkpọ ụkwụ dị oke mma, nke o kwuru bụ onyinye sitere na chi nke Seiichi ga-eji mgbe amụrụ ya. N'ime afọ niile tupu ọmụmụ Seiichi, Heikichi rụrụ ọrụ ebube na aha Tenshin Ōmikami. Na 1896, Shimada Seiichi, onye guzobere okpukpe ahụ, mụrụ. A kpọrọ ya "Shodai-sama" (初 代 様, Nna-ukwu Mbụ) site n'aka ndị na-eso ụzọ.
Seiichi anaghị eme ihe ọ bụla gbasara okpukpe ma ọ bụrụ na o nweghị mmasị na okpukpe, kama ọ bụ onye maara ihe ma nwee nnukwu ọchụnta ego. Seiichi agụghị ụlọ akwụkwọ elementrị (eziokwu nke ndị na-eso ụzọ na-ekwusi ike mgbe mgbe), na 1910 ọ ghọrọ onye na-amụ ọrụ na azụmahịa millet ezinụlọ ibe ya na Tokyo. Ọ nwetara aha ọma dị ka onye a pụrụ ịtụkwasị obi na onye a pụrụ ịtụkwasị obi, a makwaara ya maka amụma amụma ya ziri ezi. Ọ malitere igwu ahịa ma sonye na ị drinkingụ mmanya, ịgba chaa chaa na ịkọ ụkọ nke ndụ abalị Tokyo na mbido 1910s.
Site na 1916-1917 o jere ozi na Nkebi nke 3 nke Fifth Troop nke Azabu Atọkụkụ Na-anọ n'Akụkụ Na-ahụ Maka Njiri Agha. N'okpuru ncheta ya, o ji mpako na-ekwu na a họọrọ ya ka ọ chee n'ihu ọchịchị Crown Prince Hirohito (ọhụụ Showa Emperor) na ogige Azabu. Mgbe ọnwa asaa ọ gasịrị, a gbahapụrụ ya maka "enweghị ike maka ọrụ agha," nke ọ na-azọrọ bụ oge mbụ na-akpọ "Nkeji edemede 57" nke Usoro Agha iji kwe ka nnupụisi dị otú ahụ, ọ bụ ezie na ihe kpatara ya na ọnọdụ adịghị edozi.
Mgbe oghasịrị ndị agha, Seiichi mepere ụlọ ahịa nke ya, Shimada Shōten, na 1918, nke na-esi na osikapa na bran bubata, site na 1919 ọ ghọrọ onye na-ere ahịa maka nnukwu ụlọ ahịa osikapa, Kyōsei Milled Rice. Seiichi mechara mepee alaka ụlọ ọrụ na Yamagata Prefecture, nke mechara ghọọ okpukpe ọzọ dị mkpa maka ọdịnihu Tenshinseikyō. Nakwa na 1919, ndị uweojii nyochachara ya na azụmahịa azụmahịa na-emeghị emezi nke Kyōsei Milled Rice na-eduzi, nakwa n'ihe gbasara igbu ọchụ nke onye osikapa osikapa site n'aka onye ọrụ azụmahịa. E mesịrị kpochapu ya itinye aka n'okwu abụọ ahụ.
Azụmahịa Seiichi gara n'ihu ruo mgbe ahịa ahịa ngwaahịa dara na Machị 1920, ọ na-emetụtakwa ya ọzọ na Great Kanto Earthquake na Septemba 1, 1923. Seiichi funahụrụ ngwa ahịa ya niile na ngwa ahịa ya niile, wee kpochapụ azụmahịa ya. Mgbe ya na nwunye ya laghachiri n'obodo ya bụ Ōgoe na nkenke, ọ laghachiri Tokyo wee jiri njikọ ya na-ere udon noodles site na ụgbọ ala mkpanaka wee malite azụmaahịa na ịzụrụ ntụ ọka, agwa soy na ngwaahịa ndị ọzọ. N'oge a Seiichi rịara oria taịfọd wee daa ajọ ọrịa. Ka ọ dịgodị, a mụrụ ụmụ ya abụọ mbụ, nwa nwanyị Atsuko (nke a na-akpọkwa Mitsuko) na nwa nwanyị Shigeko na 1925 na 1928, na nwa nwoke mbụ ya, Haruyuki mụrụ na 1933.
Ka ọ na-erule mmalite 1930s, Seiichi ji ụgwọ dị ukwuu. Na Jenụwarị 15, 1935 ọ tụgharịrị uche igbu onwe ya site na ịwụpụ site na Eitai Bridge na Tokyo. Mana, ọ na-echegbu onwe ya banyere ịhapụ nwunye ya na ezinụlọ ya, chetakwa akụkọ banyere ọrụ ebube ndị metụtara ọmụmụ ya nke nne na nna ya na nwanne ya gwara ya mgbe ọ dị obere. N'enweghị olileanya, ọ rịọrọ Tenshin Ōmikami ka o nye ya nduzi. Threebọchị atọ mgbe nke ahụ gasịrị, na Jenụwarị 18, Seiichi gbagara onye ọchụnta ego ya, Satō Yasutaka, bụ onye mmụọ ọjọọ na-azọrọ na ya bụ "chi nche" nke Seiichi na mberede "nwere" (保護 神, hogo-gami). Site na Satō, chi ahụ (nke Seiichi mechara chọpụta dị ka Tenshin Ōmikami) kpaliri Seiichi maka nhọrọ ahịa na-adịghị mma ma nye ya ndụmọdụ bara uru banyere azụmahịa azụmahịa na-abịa. N'isochi “ihe onwunwe,” Satō echetaghị ihe ahụ merenụ. Na ngwụcha, ndụmọdụ Tenshin Ōmikami ziri ezi na Seiichi nwetara nnukwu uru, ihe omume a wee bụrụ nke a maara dị ka ọbịbịa nke abụọ nke Chineke (mbido mbụ bụ Tenshin Ōmikami pụtara na Shimada Heikichi).
Site mgbe ahụ gaa n'ihu, Seiichi malitere ịnata ozi site na Tenshin ikmikami site na Sato, onye ghọrọ ọwa nwa oge iji soro Tenshin Ōmikami na-ekwurịta okwu. Ozi ndị ahụ gụnyere ndụmọdụ nke onwe ka ikwesị ntụkwasị obi na ịdị nsọ yana ndụmọdụ ahịa zuru oke, azụmaahịa Seiichi bidoro ịtụgharị. Seiichi malitere nzukọ okpukpe kwa ọnwa n'ụlọ ya n'etiti 1935 ma chụkwa ọzụzụ nke mmụọ na Mt. Kurama na Kyoto, na Mt. Akiha na Mt. Kuno na Shizuoka iji mee ka nghọta ya miri emi banyere ahụmịhe okpukpe a. Ọ malitekwara ịnata ike dị omimi dịka ikike ịgụ na ọchịchịrị.
Na 1936 Seiichi wuru ụlọ nke abụọ na obodo ya bụ Ōgoe, Saitama, nke mechara bụrụ saịtị okpukpe dị mkpa maka nzukọ ya n'ọdịnihu. N'otu afọ a, na December 3, 1936, nne ya nwụrụ. Ka ọ dị ugbu a, e hibere ọgbakọ izizi nke nzukọ okpukpe ọhụrụ na Tokyo na 1937, a makwaara ya dị ka Tenshin Kai. E wuru ụlọ nsọ mbụ ahụ site na onyinye sitere n'aka mmadụ asatọ, n'okpuru mkpuchi nke ụdị Buddha dị n'ụlọ Seiichi (dịka a machibidoro òtù okpukpe iwu n'oge a). Ha bidokwara “oge ịgụta ekpere,” nke ndị otu ga-adaba na nrọ ma mee amụma maka ọdịnihu. Na 1938, Seiichi gbasoro ọzụzụ nke ascetic n'Ugwu Kobugahara na Ọchịchị Tochigi. N'ime oge 1930s na 1940s otu a abụghị òtù okpukpe edenyere aha, yabụ n'etiti nchekwube oge agha nke ụmụ amaala ndị na-eso ụzọ ya gara n'ihu na-ezukọ na nzuzo, ruo mgbe mkpọpụ na nrụgide nke oge agha mere ka ndị otu gbasasịa Japan site na 1944.
N'akụkụ ihe omume okpukpe ya, site na 1930s ruo n'ọgwụgwụ nke Agha Ụwa nke Abụọ, Seiichi tinyere aka n'ọtụtụ achụmnta ego ma nwee ndị enyi na ndị na-eso ụzọ na ngalaba dị iche iche nke gọọmenti na ụlọ ọrụ. E jidere ya obere oge maka imebi iwu Ụgwọ Ọnụahịa na June, 1940, bụ nke e mesịrị kpochapụ ya. N'oge okpomọkụ nke 142, Seiichi malitere itinye aka na Japan Union Control Control; nke iwu ochichi ghapuru nke a na February 1943 (ma ọ bụ 1944?), ma e kwughachiri ọnwa abụọ ka e mesịrị. Ọ ghọrọ onyeisi oche maka otu ụlọ ọrụ textiles, bụ ebe ọ na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ dị ka Kanebo.
Na njedebe 1930s Seiichi na nwunye ya nwere ụmụ nwoke abụọ ọzọ, bụ Hiromitsu na Saburō, mana ezinụlọ ya nwụkwara ọtụtụ ọnyà. Nna ya nwụrụ na January 10, 1938, nakwa na January 26, 1941, Seiichi hapụrụ nwunye ya ka ọ bụrụ ụbụrụ. N'oge na-adịghị anya, ụmụ ya si n'obodo ha kwaga na Ogoe, Saitama, iji chọọ ebe nchekwa n'oge agha ahụ.
Mgbe njedebe nke Agha Ụwa nke Abụọ (gburugburu 1946-1947) Seiichi na ezinụlọ ya laghachiri na Fukagawa, Eitai-chō, na Tokyo. Seiichi gbara di na nwunye, o wuru ulo ohuru na Kagomachi, Bunkyō Ward na 1939, ebe o maliteghachiri nzuko okpukpe ya kwa afo. Dika ndi ya na ndi ozo gara aga na ogbako Tokyo laghachiri na Tokyo n'oge mbu, okpukpe malitere gbasaa site na Tokyo, karia site na ndi ahia ya, na emesia site na ndi ahia ya na Saitama na Yamagata. Ka ọ dịgodị, na December 1949 nwa ya nwanyị nke atọ bụ Atsuko lụrụ Shindō Akira, bụ onye mesịrị bụrụ onyeisi nchụàjà maka okpukpe.
N'ime oge mbuso agha oge nke ọgbakọ Seiichi nke Tokyo, ndị otu a maara nke ọma dịka "Kagomachi no Tenshin-sama." Otú ọ dị, ka ọ na-erule 1951, ọgbakọ ahụ na-eto eto dọtara mmasị ndị uwe ojii bụ́ ndị malitere ileba anya n'òtù ahụ. Na nzaghachi, Seiichi debara aha okpukpe dị ka Tenshin Ōmikamikyō na 1952. Site na 1960s gaa na 1970, okpukpe ahụ nọgidere na-eto eto ma ọrụ ya gbasaa. Na 1960, ụlọ nsọ Tokyo (Foto dị n'akụkụ aka nri) zuru, nke ka ukwuu site n'enye onyinye n'aka ndị òtù. Mgbe nke a gasịrị, na 1961 Seiichi natara ntụziaka sitere n'aka Tenshin Ōmikami na otu esi eme usoro ọgwụgwọ nke gụnyere injections nke "mmiri Chineke" (go-shinsui) iji gwọọ ọtụtụ ọrịa. Na 1967, ụlọ ọgwụ ha, Yamatoura Clinic, mepere emepe; e mesịrị kpọọ ya Ụlọ Nyocha Tenshin.
Seiichi na okpukpe ya nwere obere oge dọtara uche ndị mgbasa ozi na 1970s, gụnyere ngosipụta nke Seiichi na ngosi telivishọn nke ụtụtụ na NET TV (nke a na-akpọ TV Asahi) na Jenụwarị 7, 1975. Otu a malitekwara ịbanye na mmepụta ihe nkiri, gụnyere ịmepụta vidiyo na mmalite nke nzukọ na 1977. Na nzukọ, na 1976 ọkpara Seiichi bụ Shimada Haruyuki (島 田 晴 行) nọchiri ya dị ka “Nna-ukwu nke Abụọ” (第二 世 教主, Dai ni-sei kyōshu ma ọ bụ 第二 教主 様, Dai na kyōshu-elu). Na 1985, Seiichi nwụrụ, gburugburu 1990 nzukọ ahụ gbanwere aha ya site na Tenshin Ōmikamikyō na Tenshinseikyō.
Site na 1980s na 1990s okpukpe ahụ gara n'ihu na-enweta ndị otu na Tokyo, Saitama, na Yamagata, na ụlọ ọrụ ha na Tokyo's Bunky's Ward gbasaa. Malite na 1990 ha malitere inwe nzukọ ọmụmụ mmeghe yana emume ndị bụ isi n'ebe mgbakọ a bụ Makuhari Messe na Chiba Prefecture. Na 2001, ọkpara ya Shimada Kōichirō (島 田 幸 一郎) nọchiri Haruyuki, onye ghọrọ "Nna-ukwu nke Atọ" (第三 世 教主, Dai san-sei kyōshu ma ọ bụ 第三 教主 様, Dai san kyōshu-elu). Na 2006, ha rụchara ụlọ nsọ ọhụrụ na Hon-Komagome, Bunkyō Ward, Tokyo.
Ndị Tenshinseikyō na-asọpụrụ chi Tenshin Omikami, onye a na-ahụ dị ka "Chineke dị ndụ" bụ "otu chi nke Akwụkwọ Nsọ na okpukpe niile dị mkpa." Aha a na-akpọkarị Tenshin Ōmikami [Foto dị n'aka nri] n'etiti ndị òtù bụ ndị Japan okwu okwu nke chi, kami-elu (神 様). Ndị òtù na-ekwu na ha dị nsọ, na-efe nanị Tenshin Ōmikami, ma ghara ife chi ọ bụla ọzọ ma ọ bụ ndị na-agbakwunye ha. Ọzọkwa, ha adịghị ahụ ndị ndú ha ma ọ bụ onye nchoputa dịka Chineke, kama dị ka ndị ozi nke Tenshin Ōmikami. Ha na-ekwu na Tenshin Omikami abanyela n'ụwa site n'ụdị mmadụ ugboro atọ, nke mbụ dị ka Moses, nke abụọ dị ka Jizọs, na nke atọ dị ka Heikichi na Seiichi (nke a na-ahụ dị ka otu atụ). Ya mere, a na-ahụ Tenshinseiky ö dịka otu akụkụ nke otu okpukpe nile nke ụwa, ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe ọ bụla ị ga-eme n'ọmụmụ ihe banyere ozizi okpukpe ma ọ bụ mkpughe. Ụfọdụ ndị òtù na-arịba ama na ọ bụ ezie na ha kwenyere na Tenshinseikyō bụ "nri" (tadashii) okpukpe ha, okpukpe ndị ọzọ nwere ike ịbụ "ihe ziri ezi" maka ndị ọzọ, na n'ikpeazụ, okpukpe nile nwere otu mgbọrọgwụ. N'ihi ya, ndị òtù na-ekwupụtaghi asọmpi asọmpi ma ọ bụ iwe megide okpukpe ma ọ bụ nkwenkwe ndị ọzọ.
Tenshinseikyō na-elekwasị anya na nkwenkwe ukwu atọ:
● Ịdị adị nke ọrụ ebube ( kiseki ) nke Tenshin Ōmikami mere;
● "Kaadị Karmic" (N'ihi ya, m), nke mejupụtara in , kama nke onwe onye, ​​na en , karma nke sitere na ndi ozo, tinyere ndi nna nna. Dika karma abuo ndia na eme otu ihe diri onye obula (shukumei), ma ha na - ejikọkwa ndị mmadụ na ndị nna nna ha yana ndị ọzọ ha na - ezute n’oge ndụ ha. Nchikota karma onwe gi na karma nke ndi ozo ka anakpo “ihe nketa karmic” nke mmadu;
● Omume nke nna nna ochie (Senzo no shiawase wo kami-sama ni inoru, n'ụzọ nkịtị "ikpegara chi ekpere maka obi ụtọ nna nna gị") ka a hụrụ dị ka ihe dị mkpa iji mee ka karma dị ọcha (悪 因, nri) nke ndi nna nna ya ma si otú a na-emetụta akara aka mmadụ na karma (m) nke otu nwa. Dabere na akwụkwọ ntuziaka Bekee ha, “Karma ọjọọ ketara n'aka ndị nna ochie chọrọ ka Chineke wepụ ya, naanị mgbe ahụ ka ị nwere ike ikpe ekpere ka uche gị mezuo. Correctzọ ziri ezi isi kpee ekpere bụ ibu ụzọ kpee ekpere ka e wepụrụ karma ọjọọ nke ndị nna nna gị, wee kpee ekpere maka nzọpụta nke gị ma kpechaa ekpere maka ọganihu ụmụ gị. ”
Ozizi isi gụnyere "Ozizi nke Chineke" (御 心, Mi-gokoro), otu nchịkọta nke okwu sitere na Tenshin Ōmikami nye onye nchoputa Shimada Seiichi maka usoro ndu ndu ya ma chịkọta ya tupu ya anwụọ. Ozizi a nwere nkeji okwu iri-ano na asaa na-ekwusi okwu ike banyere echiche dị mma, ezi obi, ịrụsi ọrụ ike, nnọgidesi ike, ịtụgharị uche nke onwe, ekele, na mgbaghara. A na-ekenye ụbọchị ọ bụla n'ọnwa nkuzi nke ụbọchị ahụ, ka a lebara ya anya na nzukọ kwa ụbọchị na nke ndị otu gosipụtara, a na-agbanwe nkuzi kwa ọnwa. Dabere na ahụmịhe onye nrụpụtara dị ka onye ọchụnta ego, ọtụtụ nkuzi na-ekwu banyere otu esi enweta ihe ịga nke ọma na ọganihu, gụnyere ụkpụrụ omume kwesịrị ekwesị maka iso ndị ahịa, ndị ọrụ, na ndị ọrụ ibe ya na-emekọrịta ihe. Ozizi nkuzi ndi ozo gunyere ekpere ndi edere n’ekpere ekpere ha, Tenshinseikyō Norito, na akwụkwọ "The Origins" (onyinye, yurai), [Image na nri] ederede nke edere ndụ nke onye nchoputa.
Enweghi ozizi omumahu ma obu ozizi doro anya banyere mpaghara ime mmuo ma obu ndu. Mgbe mmadụ nwụsịrị, mmụọ ha na-anọgide na-adị na mpaghara ime mmụọ ma ihe nketa ha na-emetụta ndị dị ndụ.
Ememe ndị isi gụnyere ọrụ ofufe a na-eme na ụlọ nsọ mpaghara na isi ụlọ ọrụ kwa izu, ndị otu nweere onwe ha ịbịa ọtụtụ ma ọ bụ ole na ole ka ha chọrọ, ebe ọtụtụ ndị otu na-aga naanị na Sọnde. A na-enye ọrụ ahụ ugboro asatọ kwa ụbọchị na nkezi iji gboo mkpa usoro ihe omume dị iche iche nke ndị otu. A na-eme emume a na-eme kwa ọnwa kwa ọnwa na nke iri na otu n'ọnwa ọ bụla, a na-emekwa emume kwa afọ iji mee mmemme nke ndụ onye guzobere ya na nhazi nke nzukọ ahụ.
Ọrụ a na-eme kwa ụbọchị na-adịru oge iri ruo nkeji iri na ise ma na-eme ya n'ụlọ arụsị mpaghara ha na isi ụlọ ọrụ ha. Tupu ha abanye n'ụlọ arụsị, ndị otu na-akwọ aka ha na bezin n'ọnụ ụzọ. Ozugbo n'ime ụlọ nzukọ ahụ, ndị otu nọ na pews ndị ahaziri ma hazie n'ụdị yiri ụka Kraist. Ndị nchụàjà abụọ na-arụ ọrụ ndị a na ọkwa dị elu nke na-enye onyinye n'ebe ịchụàjà abụọ, otu na ime Buddha na nke ọzọ na imewe Shinto, nke na-anọchite anya ndị nna nna ndị otu na chi Tenshin Ōmikami. Ọrụ na-amalite site n'ịgụ ekpere abụọ site n'akwụkwọ ekpere nke edoziri n'ụdị mpempe akwụkwọ sutra-style. Ndị otu na-akụ aka ugboro abụọ na mbido na ngwụcha nke ekpere ọ bụla, na-ada oke ụda na n'otu. Thegbaso ọrụ a, ndị otu nweere onwe ha ịmekọrịta n'ụlọ nzukọ.
Mkparịta ụka bụ ihe ọzọ dị mkpa nke ọrụ Tenshinseikyō. Ndị nchụàjà na-enye ndụmọdụ ma na-enye ndụmọdụ na ememe ọrụ maka ndị òtù. A na-eji ụlọ ndị a raara onwe ha nye na ụlọ nsọ ha maka nzube a, ha na-enwekwa oge maka ọkwa maka ego. Na mgbakwunye na nyocha, Tenshinseikyō na-agba abụọ Tenshin Clinics, nke dị n'akụkụ isi ụlọ ọrụ Tokyo [Foto dị n'aka nri] na otu na Nagasaki, nke na-enye ụdị "mmiri nke Chineke," nke a kpọrọ go-shinsui 御 神水), site na ogwu. Ekwuru na enwere ike ngwọta, ma ọ bụ maka ndị otu na ndị na-abụghị ndị òtù maka iji ego (ndị otu na-enweta ego dị ukwuu).
Ngwunye ahụ bụ usoro e kpugheere Shimada Seiichi mgbe onye dọkịta nọ na Tenshinseikyō rịọrọ ya, ya enwee ike iwepụ nwunye ya (lee Watanabe na Igeta 1991). Ihe e bu ụzọ mee bụ mmiri awụsara mmiri n'ihu ebe ịchụàjà Tenshin Ōmikami, nke chondroitin sulfate kwukwara. O yiri ka usoro a agbanweela kemgbe ọtụtụ afọ, dị ka Watanabe na Igeta (1991) si kwuo, dere na njedebe 1980s:
Ka ọ dị ugbu a, ụzọ eji akwadebe goshinsui bụ maka mmiri a ga-enye tupu chi a, tinye ya n'ime karama nke a kara akara, wee tinyekwa ya ọzọ na ekpere n'ihu chi. Ha na mmiri, ọgwụ na ọgwụ ndị amachibidoro iwu raara onwe ha nye chi ahụ, a na-ekwukwa na ọ bụrụ na a gwa chi ka ọ kuo ume ya na ọgwụ ahụ, ọgwụ ndị ahụ ga-aghọ "asụsụ sitere n'aka Chineke." Ebe goshinsui na tonics nke Chineke di iche na ogwu ndi mmadu meputara, ha siri na ha gwo oria obula n’enweghi nsogbu. N'otu oge ahụ, ọ pụtara na ọtụtụ akụkọ na okwuchukwu ndị isi okpukpe kwuru na mmiri agaghị enwe mmetụta ma ọ bụrụ na ndị kwere ekwe enweghị okwukwe siri ike. ”
A na-edozi mmiri nke Chineke site na-etinye ya n'ime onye ọrịa na-eji sringe hypodermic. Nke a na-eme site n'aka dọkịta nwere ikikere na Ụlọ Nyocha Tenshin Tokyo ha nakwa na Ụlọ Nyocha Naensaki Tenshin. Ka ha na-anakwere ojiji nke mmiri Chineke, ndị dọkịta na-enye ikikere na ọgwụgwọ nke ụlọ, ha na-enyekwa ndị na-akpọga n'ụlọ ọgwụ ndị ọzọ na nsogbu ndị dịka ọrịa cancer ma ọ bụ ọrịa na-ebute. Ya mere, ndị ọrịa na-ejikọta ọgwụgwọ sitere n'aka Ụlọ Ahụgwụ Tenshin na ụlọ ọrụ ahụike (isi). A na-ekwu na a ga-agwọta ụdị ọrịa dịgasị iche iche site n'anụ ahụ na ọrịa uche. Omume a mere ka esemokwu dị n'etiti 1960s mgbe ngalaba Ngalaba Ahụike nyochachara nchịkwa ha nke injections n'enweghị ikikere. Ha nabatara ma nweta akwụkwọ ikike maka Yamatoura Clinic (nke bụ Tenshin Clinic) n'ihi ihe a (lee Watanabe na Igeta 1991).
Ndi ochichi Tenshinseikyō gbasoro usoro ihe ndi ozo, onye isi nke ato bu Shimada Keduhirō, onye a maara dika onye isi nke ato na onye isi nke abua, Shimada Haruyuki, nke a maara dika onye isi nke abuo. Shimada Haruyuki, n'aka nke ya, bu ọkpara nke onye guzobere ya, Shimada Seiichi, onye a na-ekwu na ya bu Nna-ukwu mbu.
Nzukọ ahụ gụnyere ndị nkịtị na ndị ụkọchukwu oge nile. Mgbe okenye okenye nke Shimada Seiichi bụ onye mbụ zutere chi nsọpụrụ Tenshin Ōmikami ma rụọ ọrụ dị ka arịa maka edemede na ọrụ ebube na-arụ ọrụ maka chi, a dịghị asọpụrụ ya dịka onye nhazi nke nzukọ ahụ.
Nhazi ụlọ ọrụ na-agụnye Nna-ukwu nke ugbu a dị ka isi nke nzukọ ahụ na-arụ ọrụ n'isi ụlọ ọrụ dị na Tokyo, ndị ụkọchukwu oge nile a na-akpọ ndị ụkọchukwu (kyōshi) ndị na-agba ọsọ n'ememme kwa ụbọchị ma na-enye ndụmọdụ maka ndị òtù. N'ụlọ nsọ kachasị na Tokyo, ọ dịkarịa ala ndị ụkọchukwu anọ ndị ọzọ na-elekọta ọrụ kwa ụbọchị, na ndị nchụàjà-na-ọzụzụ na-enyere aka. Ịrụ ọrụ nke ndị nchụàjà chọrọ ịghọ onye ọrụ oge niile nke nzukọ ahụ na ịmecha ọzụzụ ọtụtụ afọ na ndị isi nchụàjà. Ndị nchụàjà na-abụkarị ndị nke abụọ ma ọ bụ ọgbọ atọ. Ndị ụkọchukwu na-ebi n'ụlọ ndị mmadụ, ọ nweghịkwa ụlọ obibi. Nzukọ ahụ nwekwara ndị ọrụ ndị ọzọ oge niile na-achịkwa ihe onwunwe, mbipụta, ego, na mmepụta ihe.
Ndị òtù na-adabere na ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ otu ego na ịzụta ihe odide nsọ kachasị nsọ, ya mere, ọ bụghị ihe nketa. Ịbịkọta chọrọ nkwado nke onye so na ya ugbu a. Nzukọ ahụ na-akụda imeghegharị ntọghata ma ghara ikere òkè site n'ụlọ ruo n'ụlọ ma ọ bụ ọrụ mgbasa ozi ọha na eze. Kama nke ahụ, ha na-akwado nkwusa ozi ọma n'etiti ndị ikwu, enyi, na ndị ọrụ ibe. Ha anaghị ekwe ka ndị ọbịa na-abanyeghị n'ụlọ nsọ ha; kama nke ahụ, ndị ọbịa nwere mmasị ga-eme ndokwa na ndị ọrụ na mbụ ma ọ bụ soro otu onye so ya. Ọnụ ọgụgụ ndị nnọchiteanya na-enweghị isi. Watanabe na Igeta (1991) tinyere nọmba gburugburu 40,000, ebe ndị 2009 nọ na-atụ aro na ọnụ ọgụgụ ahụ nwere ike ịbụ na 10,000 ma ọ bụ dị ole na ole na mba niile, gụnyere ndị ọkachamara 100, ọ bụ ezie na nke a adịghịkwa edozi. Na mgbakwunye na ụlọ nsọ ha (ọ bụ eziokwuō) na Tokyo na ebe dị nsọ nke ezi na ụlọ nke onye guzobere na Saitama, ha nwere “ụka” atọ ugbu akyōnri ) na Shizuoka, Osaka, na Nagasaki, "ulo nzuko" isii "(mechaaō) na Yamagata, Sendai, Mie, Kagawa, Oita, na Hakodate.
Tenshinseikyō amaghị nke ọma, ọ dịkwa obere akụkọ banyere nzukọ ma ọ bụ ọrụ ya. Enyochaghị ihe nhazi na nzukọ ahụ, ma ruo ugbu a, o nwechaghị mmasị site na mgbasaozi ma ọ bụ ndị ọkà mmụta (lee anya ole na ole n'ime Inoue et al 1996, Watanabe na Igeta 1991). Ọrụ kachasị anya ọha ha na-eme n'oge ahụ bụ iwu ụlọ ọrụ Tokyo ha, bụ nke ndị obodo ahụ na-enweghi ike iguzogide. Otú ọ dị, enwere mkparịta ụka dị oke nro maka mgbasa ozi na-akwụsi ike na ọnụ ọnụ ụlọ ndị na-akwụ ụgwọ na weebụsaịtị Japanese, ndị dịka na usoro nchịkọta akụkọ (BBS) dịka 2ch. Ihe ka ọtụtụ na - ezo aka na ndị òtù ezinụlọ ndị ndị na - atụnye BBS ndị na - amaghị aha na - eche na ha na - akwụ nnukwu ego na nzukọ ahụ; mkpesa ndị ọzọ na-ebelata ụzọ dị iche iche nke ikwusa ozi ọma n'okpukpe ndị ọzọ.
Nzukọ ahụ jiri “mmiri Chukwu” (go-shinsui) iji gwọọ ọrịa n'oge na-adịghị anya mere ndị na-abụghị ndị òtù na-achọ ka agwọ ya dị n'etiti 1960s. Dị ka Watanabe na Igeta (1991) si kwuo, Ngalaba Ahụike nyere ịdọ aka ná ntị nye ìgwè ahụ mgbe ha malitere inye ndị na-abụghị ndị òtù na-abanye n'ụlọ nsọ Tokyo maka ọgwụgwọ. Na nzaghachi na nyocha nke Ngalaba Ahụike, otu ụlọ ọgwụ Tenshin guzobere iwu. Ndị ọkà mmụta sayensị anwalewo mmiri mmiri ya dị na University nke Tokyo (ma eleghị anya na arịrịọ nke Ngalaba Ahụike), naanị ịchọpụta na ọ bụ naanị mmiri; nke ndi otu a choro ka ha buru ihe omuma banyere odidi ebube nke mmiri nke na-egbochi echiche nke sayensi.
Dị ka obere nzukọ nke toro eto site na ọnụ, ọ gbasaa naanị nwayọ nwayọ, mana ụfọdụ ndị otu na-ekwupụta nchegbu gbasara nzukọ ahụ buru oke ibu ma tufue ederede ya. Ndi ndu n’agba ume ime ka ndi mmadu ju ajuju site n’onu-onu site na igwa ndi otu ka ha bia ndi enyi, ndi ha na ha na-aru oru, na ndi ezinulo n’ime nzuko. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị otu, ọkachasị ndị otu na-eto eto bụ ndị lere nzukọ a anya dịka “okpukperechi ụlọ” (ya bụ, okpukperechi nke bụ ọdịnala ezinụlọ nke onwe ha), ọ dị ka obere esemokwu banyere ime ka obodo ahụ too ibu. Dika onu ogugu ndi otu ugbua pere mpe na mpaghara ọ bụla, ndị otu gosipụtara obi nkasi obi n'ịmara onye ọ bụla nọ na obodo ha na ịmara ndị ikwu nke ibe ha n'ihi ụdị ọdịnala ọtụtụ nke obodo. Ọzọkwa, dịka ha kwenyere n'ozuzu ha na okpukperechi niile bụ otu akụkụ nke otu eziokwu kachasị ma na-esite n'otu chi zuru oke, enwere obere iwe n'okwu gbasara inweta ndị otu ọhụụ na ịkwalite ezi omume nke okpukpe nke ha n'etiti ndị ọzọ, ọbụlagodi n'etiti onye isi. Banyere mmalite nke 2010, ha egosighikwa atụmatụ maka mgbasawanye nke esenidụt ma ghara ịme nkwusa n'etiti ndị na-abụghị ndị Japan na Japan. A ga-ahụ usoro mmepe ha n'ọdịnihu na atụmatụ ha.
Foto # 1: Foto nke ọnụ ụzọ ọla nchara akara na isi ụlọ ọrụ Tokyo. Ọnụ ụzọ ahụ yiri "Stations of the Cross" n'ihi na otu ọ bụla na-agwa otu akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nke Tenshinseikyo. Ntube a gosipụtara ọdịdị mbụ nke Tenshin ikmikami (天 心 大 御 神).
Image #2: Foto nke ogidi ndị dị n'ihu ọnụ ụzọ nke isi ụlọ ofufe dị n'isi ụlọ ọrụ dị na Tokyo.
Image #3: Foto nke nkedo ihe oyiyi nke anyanwụ, ihe nnọchianya Tenshin Ōmikami (天 心 大 御 神) n'isi ụlọ ọrụ ha dị na Tokyo.
Foto #4: Foto nke ihe mkpuchi nke ederede dị nsọ na nsụgharị Bekee.
Image #5: Foto nke n'ihu ụlọ ọgwụ Tenshin, nke dị n'ofe okporo ámá si n'isi ụlọ ọrụ Tokyo.
* Ihe profaịlụ a dabere na ọrụ onye edemede na otu ahụ yana nkwukọrịta onwe ya na ndị otu ya, yana akụkụ ya na akwụkwọ nyocha nke onye edemede nke PhD “Okpukpe nke Onwe Ya na Omume Ọha: Nghọta Okpukpe nke Omenala na Contemporary Japan” (Mahadum Yale, Ngalaba nke Ihe omumu, 2013).
Inoue, Nobutaka. Komoto Mitsugi, Tsushima Michihito, Nakamaki Hirochika, na Nishiyama Shigeru. 1996. Shin-sh ūkyō Kyōdan / Jinbutsu Jiten (The Encyclopedia of New Religions Organizations and Major Figures). Tokyo: Kobundo.
Tenshinseikyō Official Website. 2010. Nweta site na http://www.tenshin-seikyo.or.jp/en/ na 20 May 2016.
Watanabe, Masako na Igeta Midori. 1991 . "Alinggwọ Ọrịa na Okpukpe Ọhụrụ: Charisma na" Mmiri Dị Nsọ '. Akwụkwọ Contemporary on Japanese Religion 2. Tokyo: Institute for Culture and Classics Japanese, Mahadum Kokugakuin.